Candy Crush အဆင့် 136 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush အဆင့် 136 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 23, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
သင်၏ဘ ၀ သည်အရောင်နည်းသည်ဟုခံစားဖူးပါသလား? သင်၏ဘ ၀ ကိုအရောင်များထည့်ရန်လိုအပ်ပါသလား? သငျသညျခံစားမိလျှင်ကောင်းပြီ, ပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌သငျသညျဖြစ်ကောင်းသေးသကြားလုံးနှိပ်စက်ခြင်းကိုမကစားကြပြီမဟုတ်. ဤသည်ရောင်စုံသကြားလုံးတစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ထဲကတချို့ကစင်းနေကြသည်, some are wrapped and some are only simple candies. You have to crush these candies to achieveanew level. Isn’t this interesting?
People who play this game find it interesting. သို့သျောလညျး, what they don’t like is the fact that they do get stuck at certain levels. You are forced to panic in Candy Crush Level 136. Reason being it isacomplex level which requires proper moves. What if we can help you with this level? Would this make you happy? အမှန်တကယ်, I know it will, so here we are bringing you Candy Crush အဆင့် 136 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ.
It is consideredacomplex level because it requiresafew complexities to be solved. In addition to this, at this level, you have to collect wrapped plusawrapped candy. ဒီလိုပါပဲ။, you also have to collect stripped candy. Along with these two, you have to getacolor bomb. Correspondingly you should score at least 30,000 points and all this has to be done in 40 ရွေ့လျား. Isn’t thisatough task? တကယ်မဟုတ်ဘူး, if you follow our tips and tricks you would be able to clear this level in one go.
Try to make moves lower on the board as this will help in keeping chocolate at bay. ထို့အပြင်, it will also help you to make special combos which in return will bring down more candies. ဒီလိုပါပဲ။, you should focus on combining two wrapped candies because it is the hardest part of this level.
As per special candies are concerned, focus on making the right ones. Comparatively, it is difficult to make these special candies next to each other so don’t move them together. Ideally, ဤအဆင့်အတွက် အချိန်မီ သင်၏ ရွေ့လျားမှုများကို စီစဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။.
ရောင်စုံသကြားလုံးအမှာစာများဖြည့်ရန် သင်၏ အထူးသကြားလုံးများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သတိထားပါ။. ထို့ကြောင့်, Color Bomb သည် သကြားလုံးများကို ဖယ်ရှားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အစား စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် သင့်အား ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်မှာ ဂိမ်းကို စီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။. လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။. ဖော်ပြထားသည့် လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း သင်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အဆုံးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန် ဆက်လက်ရှိနေသင့်သည်။. မင်းရဲ့ အမှတ်စာရင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ။. အမြဲတမ်းကူညီလိမ့်မယ်။.